लगानीकर्ताले छिटोमा मङ्सिर १९ गतेसम्म र ढिलोमा पुस १६ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन। लगानीकर्ताले न्युनतम ५० कित्ता र अधिकतम ८ लाख कित्ता सम्म आवेदन दिन सक्ने छन । सी आश्वा सदस्य सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरोशेयर अनलाइनबाट मात्र आवेदन दिन सकिने छ । कम्पनीको शेयर निष्काशक तथा बिक्रि प्रबन्धक सिद्दार्थ क्यापिटल रहेको छ ।
जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणमा आजदेखि साधारण सेयर बिक्रि खुला गरेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणलाई १६ करोड ९० लाख ४७ हजार बराबरको १६ लाख ९० हजार ४७० कित्ता शेयर बिक्रि खुला गरेको हो। कम्पनीले यसअघि आयोजना प्रभावित इलामका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्रि खुला गर्दा अवितरित २ लाख ४२ हजार १० कित्ता समेत जोडेर अहिले सर्वसाधारणलाई आइपीओ बिक्रि खुला गरेको हो।
शेयर बजार घट्नुको कारण : स्टकको नयाँ प्रणाली र लगानीकर्ताको मनोविज्ञान
बजार लगातार ओरालो लाग्दै आएको छ । बजार ओरालो लाग्दा सबैभन्दा बढी पीडा लगानीकर्तालाई दिएको छ । स्टक भन्छ –कुनै पनि प्रकारको समस्या रहेको छैन । तर बजारको अवस्था हेर्दा स्टकले भनेको कुरा पत्याउने अवस्था पनि छैन
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीले प्रभावकारी काम गर्न नस्क्दा शेयर लगानीकर्तालाई सबैभन्दा ठूलो समस्यामा पारेको छ ।
बजारमा यसकारण आयो उछाल, घटेको बेला लगानी गर्ने मालामाल !
सेयर बजारमा उछाल आएको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले धमाधम लाभांश घोषणा गर्न थालेपछि यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिएको हो । यस्तै, बित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन लोनलाई सहज बनाएसँगै लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता हुँदा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले प्रतिस्पर्धामा मार्जिन लोनको अफर गर्न थालेपछि यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको हो ।
दुई घण्टामै आधा अर्बको शेयर कारोबार
मंगलबार बजार खुलेदेखि नै निरन्तर बढेको नेप्से दुई घण्टाको अवधिमा नै करिब १३ अंकले बढेर १२७० अंक नाघेको छ ।
गत अार्थिक बर्षको लाभांश घोषणा गर्न बाँकी भएकाले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण वाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको हो । असाेज ८ गतेसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंकले गत बर्षकाे लाभांश घाेषणा गरेका छैनन् । अर्काेतर्फ बैंकहरुले चालू बर्षको पहिलो त्रैमासमा गरेको प्रगति आंकलन गरेर पनि लगानीकर्ताहरुको माग वाणिज्य बैंकमा देखिएको छ । केही बजारका ठूला खेलाडीहरुले पहिलो त्रैमासको नाफाका आंकलनका हल्ला फैलाएर समेत बजारमा चलखेलको प्रयास गरेको कारोबारीहरु नै बताउने गर्छन् ।
बजार घटाउने गिरोहमाथि निगरानी, बढ्न थाल्यो नेप्से
साताको दोश्रो दिनदेखि बढ्न थालेको बजार मंगलबार पनि त्यही लयमा कुदेको छ । बजारमा बिस्तारै डाउनट्रेण्डको अन्त हुने विश्लेषकहरुको भनाई, बजार घट्ने कारणबिना नै अनावश्यक चलखेलबाट घटाइएको नियामक निकायहरुका जिम्मेवार अधिकारीहरुको भनाई लगायतका कारणले बजार बढ्न थालेको देखिएको छ ।
नेप्सेको गिरावट रोकिएन, घट्यो ३ अंकले
साताको अन्तिम दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३ दशमलव १५ अंकले घटेर १ हजार १ सय ९१ दशमलव २० को बिन्दुमा कारोबार बन्द भएको छ । त्यस्तै ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको मापन सेन्सेटिभ परिसुचक भने शुन्य दशमलव ७५ अंकले घटेर २ सय ५० दशमलव ९६ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ ।
बढ्न थाल्यो सेयर बजार
आज सेयर बजारमा १ सय ६० कम्पनीका ११ लाख कित्ता सेयर २९ करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ । आज सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको सेयर किनबेच भयो । आज नेप्से परिसुचक ४.७७ अंकले बढेर ११९९.२७ विन्दुमा पुगेको छ ।
आँखु खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले साउन १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्ने भएको छ ।
आँखु खोला हाइड्रो पावर कम्पनीले साउन १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीकाले आफ्नो चुक्तापूँजीको १० प्रतिशतले हुन आउने ८ करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ आयोजनास्थल धादिङबासीलाई निश्कासन गर्न लागेको हो । तर स्थानीयले शेयर खरिद गरेमा शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ३ बर्षसम्म बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् ।
आक्रोशित लगानीकर्ता, घाटामा कर तिराउनु कुन सिद्दान्त हो सरकार ?
सरकारले एकाएक बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई नै आधार मानेर पुँजीगत लाभकर लगाउने निर्णय गरेपछि यतिबेला समग्र पुँजी बजार अन्योलको भूमरीमा फसेको छ । लगानीकर्ताहरु सरकारसँग आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी समेत गर्न थालेका छन् । उनीहरुले लगभग स्वतस्फूतः रुपमै दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । साथै, लगानीकर्ताका ३ वटा संगठन पनि आन्दोलनकै मोर्चामा उत्रिएको छ ।
सेयर बजार ठप्प पार्न लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कार्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन्
सेयर बजार ठप्प पार्न लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कार्यालयमा धर्ना दिन थालेका छन् । सोमबार संगठनहरुको आग्रह विपरीत सेयर कारोबार भएपछि मंगलबार लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कार्यालयमै गएर धर्ना दिएका हुन् । जबर्जस्ती तरिकाले कारोबार गरिएमा ब्रोकर कार्यालयमा ताला लगाउने सम्मका रणनीति बनाइएको छ ।
लगानीकर्ता आफैंले कारोबार ठप्प पारेको बिरलै घटनामध्येको यो एक
लगानीकर्ताको विद्रोहका कारण मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कुनै कारोबार हुन सकेन । लगानीकर्ता आफैंले कारोबार ठप्प पारेको बिरलै घटनामध्येको यो एक हो । आन्तरिक राजस्व विभागले हकप्रद र बोनस शेयरमा अग्रिम कर असुली गर्न दिएको निर्देशनका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका शेयर बजारका लगानीकर्ताले मंगलबार शेयर कारोबारमा ब्ल्याक आउट गर्दै कारोबार ठप्प पारेका हुन् । विभागको निर्णय फिर्ता गराउन उनीहरूले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज तथा सबै ब्रोकर कम्पनीको कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गरेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित क्यापिटल मार्केट एक्स्पो २०१८को उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजी बजारमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति सहभागी हुने वातावरण निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।
बैंकहरु निरन्तर यसरी लागे प्रगति पथमा
सञ्चालनमा रहेका सबै वाणिज्य बैंकहरुको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ । अधिकांश बैंकहरुको चक्ता पुँजी पनि राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार ८ अर्ब भन्दा बढी पुगिसकेको छ । धेरैले नाफा पनि बढाएका छन् । पुँजी वृद्धि भएसँगै वाणिज्य बैंकहरुलाई लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । पुँजी वृद्धिले वित्तीय व्यावसायलाई...
युनाइटेडको शेयरमा किन झुम्मिए लगानीकर्ता ?
युनाइटेडले १० कित्ता बराबर २४ कित्ता हकप्रद शेयर दिने घोषणा गरेपछि कम्पनीको शेयर किन्न लगानीकर्ताहरुको भिड देखिएको हो ।
सेयर कारोबारमा उच्च सुधार,
सेयर कारोबारमा उच्च सुधारठूला लगानीकर्ता बजार पसेको संकेत
आइतबार नेप्से ४४.२६ अंकले बढेर १२९४.६५ अंकमा पुगेको छ । यसदिन १७६ कम्पनीको २३ लाख १२ हजार कित्ता सेयर ९१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भयो । कारोबारमा आएका सबै समूहमा आएको सुधारले समग्र नेप्से तथा कारोबार रकममा वृद्धि आएको हो।
साञ्जेन र रसुवागढी हाइड्रोपावरका सञ्चयकर्ताले क्रमशः ४० देखि ८० कित्ता सेयर हात पारे
कम्पनीले सञ्चयकर्ताको लागि कुल ७१ लाख १७ हजार कित्ता अर्थात ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँको सेयर जारी गरेको थियो
सेयर बजार छिनछिनमै तल माथि गरिरहनुमा के छ खास रहस्य ?
लगानीकर्ताको आत्मबल कमजोर भएकाले पनि बजार एउटा गतिमा अघि बढ्न नसकेको हो । बजार बढ्छ भन्नेमा लगानीकर्ता ढुक्क हुन नसकेको अवस्थालाई पनि यसले संकेत गर्छ ।
अघि बढ्यो त्रिशुली गल्छी, सिद्धकाली पावर र चिनियाँ कम्पनीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदै, १० अर्ब लगानी गर्ने
सिद्धकाली पावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली गल्छी आयोजना इन्जिनियरिङ, परक्रयुरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्सिङ(इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
जसरी घट्यो उसैगरी बढ्यो बजार,
यस्तो बेलामा बुद्धिमता अपनाई राम्रा कम्पनीहरुको सेयर सस्तोमै खरीद गर्ने अवसर छोप्नतिर लाग्नसके, भविष्यमा यसले राम्रो प्रतिफल दिनसक्छ ।
हर्नुस कस कस ले पैसा छापे घट्दा अतालिने र बढ्दा हौसिने प्रबिधी कति धातक
सेयर लगानीकर्ता संघ पनि तात्यो, १७ बुँदे माग पाँच दिनभित्र पूरा नगरे आन्दोलन !
’ संघले भनेको छ–‘बजार सुधार तथा विस्तारका कामहरु ठप्प रहेका र दिनदिनै बजारमा आपूर्ति थपिने, तर माग भने घट्दै गएका कारणले शेयरको मूल्य तीब्र रुपमा ओरालो लागेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले शेयर धितोकर्जा लिएका लगानीकर्ताहरुलाई बैंकहरुले गर्ने मार्जिन कलले झनै ठूलो संकट ल्याईदिने खतरा बढेको छ ।’
सेयर लगानीकर्ता संघले सरकार तथा सम्बद्ध निकाय समक्ष १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ । संघले ती माग ५ दिनभित्र पूरा नभए कडा संघर्ष थाल्ने घोषणा गर्दै सो अवधिमा लगानीकर्ताका अन्य संघसंस्थाले थाल्ने आन्दोलनमा समेत ऐक्यबद्धता जनाउने प्रष्ट पारेको छ ।
जलविद्युत् कम्पनी सेयरमा लगानी गर्दा के-केमा ध्यान दिने ?
चालु आवको तेस्रो अन्त्यसँगै जलविद्युत् कम्पनीहरुले पनि धमाधम वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन् । भविष्यमा यो क्षेत्र स्टक एक्सचेजमा धेरै हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । हालसम्म १२ वटा जलविद्युत संस्था नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।
नेप्से परिसूचक १७ दशमलव १८ अङ्कले गिरावट
मङ्गलवार दिनभरीको कारोबारपछि नेप्से परिसूचक १७ दशमलव १८ अङ्कले घटेर १ हजार ३ सय ९६ दशमलव ७२ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्से परिसूचक १ दशमलव २२ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबार शूरु भएदेखिनै बजार घटेको हो । सो दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा ....